Maalinta: Juun 13, 2019
Ankara Malıköy Cayaaraha Qadka Isku-xidhka Aagga Wershadaha ee Qandaraaska Dhismaha Tijaabada 2019 / 121857 GCC qiimaha xNUMX TL iyo qiyaasta qiimaha 16.430.751,90 TL ee Agaasinka Waddooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) [More ...]
Dhismaha Wadooyinka Baabuurta u dhaxeeya Saldhigga iyo Jidka Waddada
TCDD 7 Agaasinka Gobolka ee Saldhigga Tareenka iyo Saldhigga Wadada u dhaxaysa jidka lugaynta inta u dhaxaysa natiijada hindisaha Waddada Tareenka ee Waddanka Turkiga. Agaasinka Adeegga Iibsashada iyo Kaydinta Alaabta ee Gobolka [More ...]
Shil gaari oo ka dhacay Elazığ 1 Dhimasho 2 ku dhaawacantay
Shaqaalaha miinada ee shaqaalaha shirkadda korontada ee Elazığ ayaa waxaa ku dhacay tareen. 1 dad ayaa la dilay iyo dadka 2 ku dhaawacmeen. Sida laga soo xigtay xogta laga helay shilka, Elazığ Sivrice iyo heerka degmada Maden [More ...]
Mudnaanta Muwaadinimada ee Muhiimka Gaadiidka Dadweynaha ee Sakarya
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya ee kooxaha ku xidhan kooxaha gaadiidka dadweynaha waxay sii wadayaan inay sii kordhiyaan qanacsanaanta. Kooxaha ku xiran Waaxda Gaadiidka ee Dowladda Hoose ee Magaaladda waxaa ay ku sameyn doonaan qaboojinta iyo kormeerka nadaafadda gawaarida gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Kantaroolka Magaalooyinka ee Kobanheegan, Machadyada Tacliinta Sare ee Imtixaanka Isbuucaan (YKS) 'si ay u siiyaan ardayda bilaashka ah iyo imtixaannada. 15 Juun 2019 Sabtida iyo 16 June 2019 ayaa la qaban doonaa maalmaha axadda. [More ...]
Abaalmarin Caalami ah oo loogu talagalay Qalabaynta Dib-u-warshadaynta ee IMM
"Qalabaynta Dib-u-warshadaynta ee Dib-u-warshadaynta, oo ay fulisay Dawladda Hoose ee Istanbul oo ku taala xadka udhaxeeya Zero Waste, waxay heshay abaalmarin kale. Shirka Caalamiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha, oo ah waxqabadka ugu weyn ee adduunka ku yaala gaadiidka dadweynaha iyo [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, 9 maalinti fasax ah oo caan ah oo kuyaala garoonka diyaaradaha ee 6,4, 3,2 million buses, 3,8 million train ayaa soo wariyay in adeeggu helay. Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit [More ...]
Duqa Magaalada Samsun Mustafa Demir ayaa siiyay war wanaagsan oo loogu talagalay dhalinyarada udiyaarinaysa jaamacadda: YKS waxaa la qaban doonaa Sabtiyada iyo Axadaha basaska iyo taraamijyada bilaashka ah ee loogu talagalay ardayda ARRIMAHA CODSIGA BAARLAMAANKA [More ...]
Nadiifinta degmada Söke ee degaanka ee TCDD ayaa la qiimeeyay
Tareenka oo maraya marxaladda Atatürk ee Söke iyo agagaarka agagaarka ah wuxuu ka tirsan yahay TCDD. Muwaadiniinta mucaaradka ah ee mucaaradka ah ee aan nadiifin muddo dheer, cabashooyin ka soo kordhay degmada. Duqa magaalada Söke Levent Tuncel, [More ...]
Baahida loo qabo Baarista Shilalka Shilalka Waxaa diidaya AKP
Ku saabsan waddada tareenada iyo shilalka, Gudoomiye ku-xigeenka CHP-da ayaa la siiyey qorshe cilmi-baaris. Mooshinka ayaa diidey codadka AKP iyo MHP. Sida laga soo xigtay Hüreyra Oflaz oo ka yimid Odatv; General TGNA Golaha Guud, Golaha [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Şanlıurfa waxay bixin doontaa adeegyo gaadiid oo bilaash ah imtixaanka YKS oo la qaban doono dhamaadka isbuuca. Dowladda Hoose ee Magaalada, oo soo gabagabeysay diyaarinteeda, ayaa sidoo kale go’aamisay jidadka iyo khadadka. Cabbirka, Xulashada iyo Xarunta Meelaynta (OSYM) ee 15 [More ...]
Gaziantep Award for Gadiidka ka Gaziantep
Dawladda Hoose ee Gaziantep waxay abaal marin ka heshay natiijooyinka shaqooyinkan iyadoo yareyneysa dhibaatooyinka taraafikada magaalooyinka iyadoo ay weheliso mashruucyo badan iyo hal-abuurnimo dhanka gaadiidka. 'Shirweynaha Wadatashiga Dadweynaha iyo Cadaaladda' oo lagu qabtay magaalada Stockholm, Sweden [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Sakarya waxay sii wadaysaa martigelinta booqdayaasha Baaybalka Baaskiilka ee Baastada. Ugu dambeyntiina, ardayda dugsiga sare ee Karasu Manavpınarı waxay casharo ka qaateen tababarayaal khibrad u leh 'Baaskiil aamin ah oo taraafikada'. Dhallinyarada iyo Cayaaraha Dawladda Hoose ee Magaaladda [More ...]